Caasimaddii Dadkeeda & Dawladeeduba Dayaceen | somalilandtoday.com
← Halkan Ka Daawo: Xidhibaan Cismaan Jiciir Oo Dhaliilo Culus U Jeediyay Madaxweyne Biixi Iyo Baarlamaanka Somaliland
Dhalinyarada Dunida Saddexaad Ma Boodh Gidaar Ku Yaalbaa, Maxaa Badey Iney Dhigooda Horu-marey Isu Qoraan Yagoo Nool. →
Caasimaddii Dadkeeda & Dawladeeduba Dayaceen
waa magaalo madaxda wadan dhan oo dadkiisu ka badanyahay 4 Million waxa ku nool bulsho ku dhawaad 1.5 million Hadana ma laha Adeegyadii Ay bulshadu u baahnaayeen badankooda ama gabi ahaantoodba sida, biyo ku filan bulshada ku dhaqan magaalada, Cusbitaalo casri ah oo dawladeed oo laga hello Adeegii caafimaad ee Bulshadu U baahnayd, Wadooyin Hagaagsan oo Gaadiidku maro, Laydh Dawladeed oo Qiimo jaban ah.
Shaki igagama jiro in qofkasta oo qoraalkan cinwaankiisa akhriyay inu caasimadan garanayo sababtoo ah dadka badankoodu way wada ogyahiin magaalada ay baahiyahan bulsheed ka jiraan ilaa hadana aanay jirin cidku hawlan waxka qabashadeda dawlad iyo dadwaynaba
Hadaba is waydiintu waxay tahay dadkii iyo dawladii caasimadan mayee ?
Maxay wax uga qaban waayeen baahiyahan ka jira ?
Miyay Awoodi waayeen inay Biyo ku filan oo nadiif ah samaystaan, Cusbitalo tayadoodu sarayso oo casri ah dhistaan, Wadooyin hagaagsan dhistaan.
Xaqiiqadu waxay tahay dadki lahaa iyo dawladiiba way joogaan balse diyaar uma aha inay caasimadooda horumar ku sameeyaan oo ay aduunka hiigsato.
Dadkeenu waa dad wax qabad waxanay u baahanyahiin in lagu dhiirigalayo inay wax qabsan karaan balse dawladeenu maaha dawlad wax qabad sababtoo ah siyaasiyiinta iyo inta talada dalka gacanta ku haysaa uma fikiraan sidee bulshada waxloogu qabtaa horumarna dalka lagu gaadhsiin karaa balse waxay ka fikiran sideed fooq u dhisataa.
Ma ogtahiin inu yaryahay nin xilsoo qabtay oo aan lahayn fooq dhawr dabaq ah ama laba ilaa sadex oo shanjeer ka qaalisanba mushaharku qaadanayay intu xilka hayay.
Waxaynu u naqaana iska caadi inu ninkii xil qabtaa wax muuqda ka qabsado Sido kale waxaynu iska caadi u naqanaa inu aan bulshada waxba loo qaban sanadkastana aanay iska badalin wax muuqdaa.
Wali ma is waydiisay Su,aasha ah dadka xililka haya badankoodu ma ilooban horumarinta naftooda iyo hanti urursi balse aanay uso xasuusan waayan horumarinta dalkooda iyo dadkooda ?
Aan uso laabto Caasimada warkeedi waxa ka jira dhibaatooyin badan inta aankor kuso sheegay iyo qaarkale oo badanba hadaba qaar badanba laga yaaba inay is waydinayaan caasimadan halkay ku taala Meel fog haka doonin Waa HARGEISA miyay leedahay haykalki caasimadaha ?
looma waayin aduun lagu horumariyo balse waxaan jirin cid dhankeeda soo eegtayba dhankasta oo ay tahay.
Waxan odhan karnaa waala hagraday waxaana hagraday marka koowaad cidi shaqadan lahayd oo ahayd Dawlada, Aqoonyahankii, Dhalinyartii, Odayaashi, iyo bulshawayntii kalaba iyagoo iska indha tiraya dhibaatooyinka ka jiran magaalada iyo wadanko dhanba
By: MohamedNasri Ahmed Omar